Dowladda Oo Deeq Dawo ah Gaarsiisay Magaalada Baladweyne – Radio Muqdisho
Dowladda Oo Deeq Dawo ah Gaarsiisay Magaalada Baladweyne
Deeq Dawo ah oo ka socota dowladda Soomaaliya, ayaa maanta la gaarsiiyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan, halkaas oo maalmihii u dambeeyay ay dad ugu geeriyoodeen xanuunka shuban biyoodka ee ku faafay magaalada oo dhan.
Deeqda Dawada ah ayaa maanta waxaa Maamulka Cisbitaalka Magaalada ku wareejiyay Wasiirada Caafimaadka iyo Amniga Xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ku boorriyay Qeybaha bulshada in ay ku dadaasho nadaafadda lana qaato talooyinka caafimaadka si looga fogaado waxyeello ka dhalata cudurada sidan oo kale faafa.
“Ka hortagga ayaa ka wanaagsan ka dabatagga, sidaas darted bulshada waxaa la gudboon in ay nadaafadda ku dadaasho lana qaato talooyinka qeybaha caafimaadka si qatartaan looga fogaado”ayuu yiri Wasiir C.rasaaq.
Wasiirka Caafimaadka Mudane Maxamed Cabdinuur, oo deeqda dawada ah ku wareejinaya maamulaha Cisbitaalka guud ee magaalada B/weyne ayaa sheegay in deeqdan aysan aheyn tii ugu dambeysan ee ka timaada wasaaradda Caafimaadka ayna la shaqeynayaan maamulka gobalka Hiiraan.
“Wasiirka Amniga ayaa ku raacayaa in ka dabatagga ay ka wanaagsantahay ka hortagga, wasaaraddu maamulka wey garab taagantahay weyna wadashaqeynayaa isku duwaha wasaaradda Caafimaadka iyo maamulka gobalka”ayuu Yiri Wasiir Cabdinuur.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dhibaato ba’an ku hayay Cudurka Shuban Biyoodka Kaas oo sababay dhimasha ku dhawaad 20 ruux oo uu cudurku soo ritay
Culuma’udiinka iyo Bulshada Gaalkacyo oo cambaareeyay weerarkii dhawaan ka dhacay meel udhow Masjidka Nabbi Muxamed NNKH